Maitiro Ekutaura Nezve Iwe Pachezvako: 12 Pro Matipi (+ Mienzaniso YeZvaunotaura) - Blog
Maitiro Ekutaura Nezve Iwe Pachezvako (+ 12 Zvinhu Zvakanaka Kuti utaure)
'Saka, ndiudze nezvako ...'
Pane here mumwe mubvunzo unotyisa kunze uko?
Zvimwe kunze kwekusekuru nasekuru vako vanodzokorora kubvunza kana wakasangana nemumwe munhu akanaka, ndiko!
Zvinogona kuve zvakaoma kutaura nezvako pasina kuita netsaona uchinyepedzera kana kuzvitutumadza, asi iwe zvakare haudi kuzviitira pasi.
Kunyangwe iwe uri mubvunzurudzo yebasa, pazuva rekutanga, kana kusangana nevanhu vatsva kupati, isu tine mamwe matipi ekuti ungagone sei 'kuzvininipisa kuzvikudza'…
1. Zvichengete zvipfupi uye zvinyore.
Zvinonakidza sezvaungave uri, hapana munhu anotarisira chinyorwa semhinduro.
Nepo vanhu vari pachokwadi kuda kuziva zvakawanda pamusoro pako, ivo vanoda kuziva iyo ipfupi vhezheni yehunhu hwako ... kutanga ne, zvirinani.
Mukubvunzurudzwa, semuenzaniso, mhinduro dzako dzinofanirwa kunge dzichinyanyisa uye kusvika padanho - vazhinji vangangove vashandirwi vanoda kuziva kuti iwe unogona kudzikisira ruzivo pasi kune akakosha mabheti.
Kana iwe uri kusangana nevanhu vatsva, hurukuro dzinowanzo tevera imwe maitiro. Kunyangwe paine zvimwe zvakawanda zviri kuitika muhupenyu hwako, vanhu kazhinji vanoda kuziva kuti basa rako nderei mukati memasekonzi matatu ekusangana newe.
Isu tinoziva, tinoziva - mabasa edu haatitsanangure, asi anobatsira vamwe kuti vatore zvisarudzo, uye ndizvo zvakaita hurukuro dzekutanga.
Nokupindura zvinechimbi chimbi mumhando iyi yemamiriro ezvinhu, unozokwanisa kuziva chingave chisungo pakutanga.
Unogona bvunza mibvunzo zvakare, hongu, zvichireva kuti iwe une tikiti-yekumhanyisa tikiti yekuziva zvakawanda nezve mumwe nemumwe mune pfupi nzvimbo yenguva.
Mushure memaminetsi mashoma ekudzoka-uye-mberi, imi mose muchaziva kana muchida kuenderera mberi nehurukuro uye kupinda mune zvakadzama ruzivo.
Funga nezvazvo sekumhanyisa-kufambidzana - iwe unopa yakawanda ipfupi, punchy titbits kutanga kuenda kune kufarira uye kubatirana, uyezve wozofunga kuti wowana chechipiri chinwiwa uye kuburitsa rumwe ruzivo.
Semuenzaniso - pazuva rekutanga, taura kwaunogara, basa rako nderei, uye chimwe chezvinhu zvaunofarira. Izvi zvirevo zvitatu zvekupopota zvingangopindura mibvunzo inotevera inotevera iyo mumwe munhu aive nayo, uye iwe uchave uri munzira yekumisikidza imwe nzvimbo yaunowirirana.
2. Iva akatendeseka - iwe unozozvifarira izvi gare gare, tivimbe!
Iko hakuna chikonzero chekunyepa kana kushongedza zvaunofarira kana kubudirira.
Tora izwi redu nezvazvo.
Kubva pane zvakaitika kwauri pachako, hapana chimwe chinhu chinorwadza zvakanyanya kukunda kubvunza mukuru wako mutsva pamusoro pechinhu chaunonyepedzera kunge uchichifarira.
… Zvakabuda mumutambo wezuro husiku? Kwete chekuziva, asi ivo vanofunga kuti iwe unoziva sezvawakanga uri saka vaneshungu nazvo muhurukuro yako.
Saizvozvo, kutaura kuti iwe unogona kutaura mutauro wekunze kana iwe usingakwanise kutaridzika kunoshamisa paCV, asi zvinotaridzika kunge zvakapusa mumusangano kana uchinetseka kurangarira yako GCSE Spanish. Kwete kufamba kukuru!
Rangarira iyo episode yeShamwari uko Joey anoti anogona kutaura chiFrench nekupomba kutamba? Hazvina kushanda zvakanyatsonaka. Kana iwe uchikwanisa kudzikisa goroni remukaka mune pasi peminiti, zvakadaro, enda nazvo…
Izvi zvinoshanda nehukama nehukama, futi. Zvinogona kunzwa zvakanaka kubvumirana nemumwe munhu pane imwe hobby kana basa rebasa, asi, nekunyepedzera, uri kuzviisa mumamiriro ezvinhu ane njodzi.
Unozonyanya kunetsekana nekutsvedza uye kuratidza izvo iwe akataura nhema chena kuti ucharega kunakidzwa nekudyidzana kupi zvako nemunhu iyeye.
Edza kuyeuka kuti iwe wakakura sezvauri uye kuti iwe unogona kutendeseka pane zvaunoita, pamwe nezvausingaite.
Hapana chakakanganisika nekusabvumirana nemumwe munhu, uye haazi hobho dzese dziri kuzogoverwa. Kana iwe usiri kufarira chinhu chimwe chete chekutanga, ramba uchienda uye uwane imwe, yakafanana nzvimbo. Kuchave nemumwe mukati imomo kumwe!
dombo vsvanhu ndakasiya machisa
Semuenzaniso - ratidza chakavanzika, chinonakidza chokwadi nezvako kana kungoenda kune chimwe chinhu chechokwadi, sekukwanisa kutaura mutauro wekunze kana bata-mhando. Zvinogona kunge zvisingaite kunge zvinonakidza kwauri, asi zvinogona kungomutsa hurukuro huru.
3. Shingairira uye pindura (nenzira kwayo!)
Kana mumwe munhu akataura kuti vanofarira chimwe chinhu chaunofarirawo, iyi inzira iri nyore chaizvo yekutaura nezvako usingazvitutumadze.
Izvo zvinokubatsira iwe kubatirira iye munhu wauri kutaura naye, ivo vanozokwanisa kuenderana newe zvakanyanya, uye hurukuro yacho inonzwa zvakanyanya zvakasikwa.
Pazuva rekutanga, semuenzaniso, kuwana zvakafanana nzvimbo kunogona kuva runyararo rukuru kana ichienzaniswa neiyo yakatambanudzwa yekunyarara kwakashata.
Nekugovana kuda kwako kwechimwe chinhu, iwe unozoonekwa nenzira yakanyanya 'munhu' uye ungangove uine kubatana kwechokwadi.
Kana iwe uri mubvunzurudzo, zvinogara zvakanaka kune waunoshandira kuti anzwe sekuti vangazowirirana newe zuva nezuva.
sei kurega kuomerera zvakadaro kumukomana wako
Isu tese tinokwanisa kuve nyanzvi patinenge tichida, saka kubata kwevanhu kwakakosha chaizvo uye kunoratidza kuti uri munhu chaiyeiye, anonakidza munhu uyo ​​vachataura naye chaizvo.
Nokupindura uye nekudyidzana zvakanyanya, iwe unozvisvinura wega semunhu uye wozoona seyechokwadi, izvo zvinogona kungova chinhu chakanaka.
Ita shuwa kuti iwe unokodzera mubvunzurudzo, hongu. Kubuda nekunwa kupera kwevhiki kwega kwega kunogona kunge kuri kuita kwako, uye nekwavo (!), Asi haufanire kuunza izvozvo.
Tarisa pane rudo rwako rweFrench mutauro, kuda kwekukwira-dombo, kana rwendo rwevhiki nevhiki kuraibhurari yemuno. Zvakachengeteka zvakanyanya.
Semuenzaniso - vaudze kuti unodawo kuenda kumisika yevarimi pakupera kwevhiki uye wotanga hurukuro nezve yawave uchienda kunharaunda. Ndiani anoziva, ungatopedzisira waenda kune imwe pamwe rimwe zuva…
4. Iva nechivimbo - kana kunyepedzera kuva!
Iwe uzvizive zviri nani kupfuura chero munhu, uye iwe uri munzvimbo huru yekuzviratidza iwe muchiedza chakanakisa.
Kunyangwe iri bvunzurudzo kana zuva, urikutanga nebepa risina chinhu, zvinoreva kuti munhu wese achaziva nezvako ndizvo zvaunovataurira uye kuti unozviudza sei.
Kuzvivimba kunonetsa kune vanhu vazhinji. Edza kuzviyeuchidza iwe kuti chero munhu wauri kutaura naye haakuzive, saka ivo havazive kuti iwe unonyara uye unovenga kutaura kune vausingazive.
Kana ukanyepedzera kuva nechivimbo, ivo vanongofungidzira kuti uri. Isu tinoziva kuti hazvisi nyore chaizvo, ndosaka tichikurudzira kuti tsika ive yakakwana.
Vako vaunoda vachagara varipo kuti vape rutsigiro, saka wadii kumhanya kuburikidza nevashoma vanobvunzurudzwa navo? Paunowedzera kujaira kutaura nezvako nenzira iyi, chivimbo chechokwadi chinozowedzera. Inonzwa kunge yakapusa pakutanga, asi ichazobhadhara chaizvo.
Ichi chinyorwa chese chiri chekubatsira iwe kuti unzwe wakasununguka uye uine chivimbo mukutaura nezvako. Izvo zvekuti isu takanyora zvinoratidza chete kuti ingani nyaya inogona kuva kune vazhinji vedu, saka edza kunyaradzwa nenyaya yekuti hausi wega.
Sezvatakataura - nyepera kusvikira waigadzira. Iwe unozoshamiswa nekukurumidza kwaunoita kuti ugare munzvimbo yako nyowani semunhu ari kubuda uye nepo zvingasave zvechipiri hunhu, iwe unozokwanisa kuzvidhonza kana zvichidikanwa.
Muenzaniso - usadzokere shure, shinga nezvauri kutaura. Vako vaunoda vanofarira kana iwe uchitaura nekuti vanokuziva iwe - avo vasingafarire nekuti vanoda kukuziva iwe, saka edza kuyeuka izvo.
5. Gamuchira zvinogona kutonga.
Tinoda kukuudza kuti hapana munhu ari kukutonga, asi zvinogona kunge zvisiri zvechokwadi. Zvatichakuudza, zvisinei, ndezvekuti hazvina basa.
Chokwadi, vanhu vachaita zvisingatarisirwi kutonga , asi hapana chikonzero chekufunganya kuti vangave vari chii. Iwe unongoda kubvuma kuti izvi zvichaitika uye zviyeuchidze iwe kuti haisi nguva dzose chinhu chisina kunaka.
Kungotonga kunogona kunge kuri, 'Wow, ruoko rwakasimba!' kana, 'Ah zvakanaka, ini ndinoda kutamba tenesi futi, izvo zvakanaka' - hazvidi nguva dzose kuve izvo zvinonzwika nezwi riri mumusoro mako.
Kana iwe ukatarisa zvakanyanya pane izvo vanhu vangave kana vangave vasingafunge, iwe unozonyatso kurasika iwe pachako uye iwe unokanganwa kuti ungangove sei iwe .
Rangarira kuti chero wauri kutaura naye anoda kuziva zvakawanda nezve iwe, kungave kwebasa kana seshamwari nyowani. Kana vakatonga uye havadi iwe , hakusi kungofanana chete.
Rangarira kuti chero chii chinoitika, iwe unenge wagarika - kana ukasawana kupihwa basa kubva kuna iye mukuru wawaifunga kuti aikutonga, ndezvakanakisa. Iwe unganyatsoda kushandira mumwe munhu wawaifunga kuti aigara achikutarisira pasi here?
Mukomana wawaidanana naye angangodaro akafunga kuti zvaunofarira zvine chirema, saka wave nerombo rekutiza nekudzivisa wechipiri kufambidzana. Zvinhu hazvingambo nyatso kuitika kana iwe uine maonero akasiyana pazvinhu zvakakosha kwauri.
Kana iwe ukaedza kutanga kudyidzana kutsva neiyi pfungwa, iwe unonetseka zvakanyanya kushoma nezve mhedzisiro uye ugone kutarisa pane kungova iwe unoshamisa wega. Mhedzisiro ndeyekuti, zvese zvichashanda zviri nani mukupedzisira zvakadaro.
Semuenzaniso - taura zvaunoda urege hanya nezvako kushushikana kwakatenderedza izvo vamwe vangafunga .
6. Gadzirira chimwe chinhu pamberi.
Kana iwe uchinzwa kutya pamusoro pekupindirana kutsva, kuronga ndeimwe yenzira dzakanakisa dzekubvisa izvo zvinonetsa.
Nyora pasi runyorwa rwezvinhu zvezvinhu zvaunoita panguva ino - mhanyisa nemaitiro ako ezuva nezuva uye zviitiko zvako zvevhiki kupera mumwedzi mishoma yapfuura. Funga nezve izvo zvinhu zvaunoita uye izvo zvaunofarira, uye rangarira kuti izvi zvinogona kuve zvakasiyana zvakanyanya!
Kana iwe uchinetseka, bvunza vadikanwa vako zvavanofunga nezvazvo pavanofunga nezvako. Izvi zvinogona kubatsira kumutsa dzimwe ndangariro dzezvawave uchiita. Zvinogona kuve zvakaoma chaizvo kurangarira zvido zvedu kana taiswa panzvimbo, uye kuyeuka zvataive nazvo kwekudya kwemangwanani kwakaoma zvakakwana mamwe mazuva!
Gadzira imwe runyorwa rwezvinhu zvaungade senge kuita nehupenyu hwako. Izvi zvinogona kunge zvakatosiyana nezvinoitwa nevazhinji vedu.
Kutaura nezvako hakudi kungoita zvekupokana nezveupenyu hwako hwezuva nezuva. Zvirongwa zvemumwe munhu zvemberi uye zvido zvinogona kunge zvichinyatsoita, uye zvinogara zvakanaka kuti unzwe nezve mafambiro ari kuyedzwa nevanhu kuti vatungamire hupenyu hwavo.
Kutaura kuti iwe unoda kukwira uye kufamba nyika hachisi chinhu chakanakisa kutaura mubvunzurudzo yebasa, asi zvinomutsa hurukuro huru nezuva kana shamwari nyowani.
Taura nezve zvaunoshuvira kujoina kirabhu yekutamba kana kutanga kushambira zvakare. Izvi zvinhu zvezvinhu zvinogona kunge zvisina kunakidza kwauri nekuti hausati uchinyatsozviita izvozvi, asi zvinobatsira kupa vanhu zvimwe zvehunhu hwehunhu hwako.
Mumwe munhu anozvizivisa saiye mubhengi angangotaridza kunge asiri kufadza pakarepo, asi yavo ramangwana chinangwa chekudenga kuyambuka Australia? Yakanaka inotonhorera uye zvechokwadi hurukuro-yakakodzera.
Nekuzvigadzirira iwe kune iyi mhando yemubvunzo, iwe unozopinda mune zvemagariro mamiriro uchinzwa zvakanyanya kuvimba
Semuenzaniso - taura zvawakaita mavhiki mashoma apfuura - ivo havadi kuziva kuti wanga uchironga mhinduro yako kubva ipapo! Iwe unogona kutaura nezvezvirongwa zvenguva yemberi, zvakare, uye kumhanya kuburikidza nerondedzero yawakatoita nezvezvinangwa zvehupenyu hwako.
250 Mazwi Kuti Uzvitsanangure Iwe: Tsvaga Ako Akaringana Adjectives
7. Dzorera mubvunzo.
Kana iwe uchinzwa sekunge iwe unoda maminetsi mashoma kuti ubatanidzwe mushure memhando iyi yemubvunzo, ipa zvishoma ruzivo uye wozodzorera iwo mubvunzo kwavari.
Izvo hazvingasviki se'isina kusimba 'uye ivo havazomboziva kuti iwe uri kuita zvishoma kuti ubvise kutarisa. Iwe uchasangana sewakaisa mari uye unofarira zvechokwadi kune chero mamiriro acho ezvinhu.
Kana iwe uri pane zuva kana kusangana nemumwe munhu mutsva, mumwe munhu anonzwa kunakidzwa kuti iwe uri kuvateerera uye unoita kunge une hanya chaizvo. Iwe zvakare uchawana rumwe ruzivo rutsva nezve munhu iyeye, izvo zvinogara zvichinakidza.
Muhurukuro, unobvumirwa kubvunza mibvunzo! Kungoita kuti iwe ndiwe uri pachigaro chinopisa, hazvireve kuti haugone kudzoreredza sisitimu uye kubvunza mibvunzo mishoma.
Ita shuwa kuti dzakakodzera uye dzakakodzera (usabvunze nezve muhoro!), Asi edza kunzwa wakasununguka kuongorora zvishoma. Iwe une kodzero yekubvunza zvakawanda nezve iro basa, kana nezve chero anenge ari wako wedhipatimendi maneja.
Ratidza kuti waita tsvagiridzo yako nekubvunza kuti mhinduro yemubvunzurudzo kuna X kana Y yaive - ivo vanozofadzwa kuti iwe unoziva zviri kuitika munzvimbo yavo yebasa-uye vanozokoshesa mukana wekusungwa.
Izvo zvinoratidzawo kuti iwe unonakidza, wakachinjiswa uye unoda kuve uchiita bhizinesi.
ungaziva sei kana mumwe munhu achikuitira godo
Semuenzaniso - vabvunze zvavanotarisira kubva kwauri semushandi kana kuti sei ivo vanowana vachishanda muchikwata.
8. Usatye kutaura wega…
Hapana chakaipa kudada newe uye kubudirira kwako.
Ive nekuchenjerera nematauriro auri kuita ichi chinhu chechinhu (isu tichaenda mune icho chinotevera!), Asi usanzwe sekuti haugone kuzvipemberera iwe uye nezvawakawana.
Mukubvunzurudzwa, zvakanaka kutaura nezvezvakanaka zvawakave nazvo pamabhizinesi kare. Iwe unenge wakanyora zvawakawana paCV yako zvakadaro izvi zviri kungokupa iwe mukana wekupinda mune zvakadzama uye wedzera hunhu kumashoko.
inonzi chii kana uchipomera vamwe matambudziko ako
Kana iwe uri kusangana neshamwari nyowani kana inogona zuva, zvinogara zvakanaka kuva nechivimbo. Usazvikudza, hongu, asi inzwa wakasununguka kutaura zvakanaka nezvako. Nhau dzinogara dzichinyanya kufadza kana munhu ari kuvaudza achifarira zvechokwadi zvavari kutaura!
Taura nezve izvo zvinhu zvaunofarira nechishuwo - zvichataura zvakawanda nezvako. Taura nekudada pamusoro pezvinhu zvawakaita, sezvo izvi zvichiratidza kuti unozviremekedza uye unonzwisisa kukosha kwako.
Ndihwo hunhu hwakakosha nenzira dzakawanda. Vanhu vanonyara kupemberera kubudirira kwavo vanogona kuita sevasina chokwadi kana kusava nechokwadi - izvi zviri pachena, asi zvinogona kunge zvisiri chimiro chehunhu hwako.
Edza kushandira kutaura pachena pamusoro pezvinhu zvaunogona - unogona kudzidzira kune vako vaunoda sezvo iwe uchiziva kuti ivo vanozokutsigira iwe uyejoinina nekutaura iwe kumusoro!
Semuenzaniso - usazoregedze kubva kuvhura pamusoro pezvimwe zvinonakidza uye zvinonakidza zvinhu zvawakaita. Bvunzurudzo inzvimbo yekuti iwe utaure nezve zvawakaita saka usanyara kutaura nezvenguva dzako dzakabudirira!
9.… Asi usazvitaure zvakanyanya!
Kuzviita unonzwika semunhu mukuru (izvo zvauri pachena!) Zvakanyatsonaka. Kuenda pamusoro penzvimbo uye kuuya nekuyambuka kunge kushoma? Kwete zvakanyanya.
Pane mutsara wakanaka pakati pekuzvikudza nekuzvikudza, uye isu tine mamwe matipi ekuti ugare kudivi rerudyi remutsara.
Kana iwe uri mubvunzurudzo, kutaura pamusoro pezvaunoita kwakakosha. Zvakakosha chaizvo kutaura nezvenguva dzawakashanda nekuita chaizvo, asi ita shuwa kuti uri kutaura nyaya izere.
Imwe yemabudiro ako makuru angave anga ari iwe pawanga uchishanda sechikamu chechikwata. Usazvidze izvi semuenzaniso nekuti hazvireve kuti iwe unoita chinhu wega! Kuita zvinhu mushe mushe uchishanda pamwe chete nevamwe vachiri kuita zvinhu mushe mushe.
Regedza vako vaunoshanda navo pazvinenge zvichidikanwa - kutora wega kiredhiti yeboka kuyedza kunogona kuputika zviri nyore kumeso kwako gare gare kana zvikaonekwa kuti basa rawakaita raisanganisira vamwe vanhu.
Kugona kuziva zvaunoita pamwe nekugona kwako kushanda nevamwe kwakanaka uye vashandirwi vanofarira chaizvo kunzwa kuti vanhu vanoita zvinhu zvakasiyana.
Izvi zvinogona kunyatsoita kuti unzwe kugadzikana mukutaura nezvako futi - unogona kunongedzera mipiro yako mukati mechikwata, saka pane kushomeka kushoma kwekungotaura wakasimba nezvako.
Kana iwe uri pane zuva kana kusangana nevanhu vatsva, kugara zvishoma kuzvininipisa pamwe izano rakanaka, kutanga nekutanga.
Fungidzira kuti waizonzwa sei kana ukasangana nemumwe munhu mutsva uye zvese zvavakataura nezvazvo kupenya kwavo, kugona kwavo pabasa, uye mota inodhura yavakangozvitengera.
Nenzira dzose, sezvatakakurudzira, iva nechivimbo kana uchigovana zvinhu pamusoro pako, asi yeuka kuti hurukuro dzinoenda munzira mbiri.
Chengetedza mumwe munhu wacho kubatanidzwa nekukoka pfungwa uye nekubvunza mibvunzo kumashure, kwete kungo taura wega nguva yacho yese!
Iwe unozowana ichi cherudzi rwechinhu chiri nyore kwazvo paunonyanya kutaura nevanhu vatsva, usazvidya moyo - haina kunyengera sekurira kwazvo.
Semuenzaniso - taura timu iwe wanga uchishanda mukati mukati uchitaura nezve kubudirira kwebasa. Izvi zvinoratidza kuti iwe hausi wekuzvifunga kana zvasvika pakutora chikwereti chebasa rakaoma, asi kuti iwe zvakare une kuzviremekedza uye unonzwisisa kukosha kwemipiro yako.
10. Zvichengete zvisina kujairika.
Kunyangwe iwe waronga zvauchazotaura kune nth degree, edza kuita zvakasununguka.
Zvakanaka kuti iwe wakagadzirira, asi vanhu vanogona kuzviwana zvichishamisa kana iwe uchiita kunge uri kuverenga kubva kune yepfungwa script.
Kuenda pamusoro pezvaunoda kutaura kwakanaka, sezvatakambotaura, asi edza kuita kuti zvinhu zvisununguke uye zvisina kujairika paunotaura.
Panguva iyo kudyidzana kwako (kubvunzurudzwa, zuva, pati nezvimwe) zvichisvika, iwe unenge wave pamusoro pemafungiro ako nguva zhinji zvekuti ivo vanonzwa kunge rwechipiri hunhu. Izvi zvinoreva kuti iwe unozoziva yako 'musoro' mukati nekunze uye mazwi achazongoyerera.
Vimba kuti izvi zvichaitika uye edza kuzorora. Kana iwe uchitova wakasununguka munhu ane huta , izvi zvinogona kunyengera chaizvo. Zviyeuchidze iwe kuti wadzidzira, sezvazvaive, uye ikozvino wagadzirira kushambadzira-lib zvichienderana neruzivo rwako.
Vanhu vanonzwisisa kana iwe ukatora mashoma mashoma ekupindura kumubvunzo, kunyanya hombe ine nyama yakaita seiyi!
Vabvunzi vanenge vachitarisira kuti iwe umbomira pano. Ivo vachada kuti iwe uve wakagadzirira asi havazodi kuti inzwe yakanyatso gadziridzwa. Tora zvishoma, fema uye edza uye uve wepanyama sezvaungagone.
Semuenzaniso - nyora wega script kana uchida, wobva waishandura kuita flashcards. Nenzira iyoyo, iwe unozodzidza mapoinzi akakosha pane kurongeka kwemazwi muchirevo. Izvi zvinokubatsira iwe kutaura zvakasununguka uye iwe uchayeuka zvinokukurudzira pane kudzokorora zvawakaronga izwi reshoko!
11. Dzokera shure.
Kana iwe uri kuenda kubvunzurudzo, mamwe maapps anogona chaizvo kushanda mukuda kwako. Portfolio inogona kuve yakanakisa kune yakawanda mabasa uye manhamba inzira yakanaka yekutsigira zvauri kutaura nezvako.
Kana iwe uchitaura nezvevatengi iwe waakashandura kuva vatsigiri, kana zvimwe zvekutengesa iwe zvawakawana nekushanda neimwe kambani, huya nenhamba kuti utsanangure.
Kutaura nezvako mune urwu rudzi rwepfungwa kunogona kuve kunonetsa - kunyangwe uine chokwadi sei, vanhu vazhinji vanoda kuona humwe humbowo kuti vutsigire. Kutaura kuti iwe waita zvinhu kutanga kwakanaka, asi kugona kuzviratidza pabepa (kana palaptop!) Chaizvoizvo inorongedza chibhakera.
Ita shuwa kuti iwe wakagadzirira zvizere kupinda mukati merudzi urwu rwechinhu. Iwe hausi kuda kupa mharidzo, asi iwe unoda kuve nechokwadi kuti wawana magwaro akakodzera newe uye kuti uri munzira chaiyo.
Funga nezvenzira yakanakisa yekuratidzira data rako uye kugadzirisa izvo kukambani yauri kubvunzurudza. Kana iwe uchinyorera chinzvimbo chekugadzira, tarisa icho chikamu chebasa racho mumagwaro ako. Kana iri yakawanda yekambani yakatwasuka-yakanamirwa, enda yechinyakare-fashoni uye uratidze pie chati kana girafu.
Enda pamusoro pezvinhu nemunhu waunovimba usati wapinda mubvunzurudzo. Vachakwanisa kuona-kutarisa zvauri kuita nekunongedza chero zvikanganiso zvinojeka zvauri kuita.
Ivo vanozokupa iwe kuvimba kwekusimudzira uye kukubatsira iwe kuona iwo marongero aunofanirwa kupa zvinhu mukati mawo. Izvo zvakasara zviri kwauri.
Semuenzaniso - kubatanidzwa kwako mumushandirapamwe wekambani wekushambadzira kwakawedzera kutengesa neX%, saka ratidza izvozvo kure nepake chati kana, kana zvakakodzera, infographic yekugadzira.
12. Iva anoenderana.
Izvi zvinonyanya kushanda kubvunzurudzo dzebasa - chengeta izvo zvauri kutaura zvinoenderana neCV yako.
Kana iwe uchirangarira zvisina kujairika chimwe chinhu mubvunzurudzo yako chausina kuisa paCV yako, kuzviunza zvakanaka! Asi edza kunamatira kune izvo iwe watotumira kare.
Anobvunzurudza akafadzwa zvakakwana neCV yako kuti akuendese kubvunzurudzo, saka ivo vachada kunzwa zvakawanda nezve izvo zvavakaverenga ipapo.
Mhanya kuburikidza neCV yako zvakare kakati wandei usati wabvunzurudzwa. Izvi zvinokuyeuchidza nezvezvinhu zviripo uye zvinogona kukubatsira iwe kurangarira kuti nei wakazvisanganisa.
Kurangarira misi kunogona kuve kunonetsa pane dzimwe nguva, kunyanya kana iwe uchinzwa kushushikana kana kutya. Kuva zvisingaenderane nerudzi urwu rwechinhu kuchanyatso kumira, zvisinei, uye kutya kwauchazonzwa kwave kutyisa.
Kana mumwe munhu akabvunza chimwe chinhu paCV yako, edza kuramba wakadzikama uye unomhanya uchidzoka kuburikidza nepfungwa dzako. Kana iwe wakanyatsoomerera, edza kuita joke nezvazvo kana kubvunza mubvunzo mukudzoka, senge 'Ndine urombo, iwe unorevei neizvozvo?' kana chimwe chinhu chekukutengera iwe nguva nekukubatsira kujekesa kuti chii iwe ndinofanira be achiti!
Izvi zvinonyatso batanidza kune zvese zvatave tichitaura pamusoro uye kuzvisunga zvese pamwechete. Iva akatendeseka uye iwe unozogona kunamatira kune imwecheteyo nyaya - nekuti ichokwadi!
Nekuronga zvisati zvaitika, iwe unenge uchinyatso kuziva izvo zvaunoda kutaura nezvazvo uye unenge uchinge uchitaura iye anobvunzurudza kuburikidza CV yako, zvakanyanya.
Kana iko kusangana kwacho kuchinyanya kuitika, nezuva kana shamwari nyowani, izvi zvichiri kushanda…
… Uchaonekwa nekuvimbika kana usingaenderane. Vanhu avo vari munzvimbo yese yenzvimbo vanogona kusangana sevasina kusimba kana zvishoma kufungira.
trisha paytas uye david dobrik
Hatisi kureva kuti iwe unofanirwa kunamatira kune imwe chete musoro wenyaya wekutaura, zvakadaro. Taura nezvako uye zvakasiyana-siyana zvinhu zvawakaita nehupenyu hwako, asi gara unoenderana iwe pachako.
Semuenzaniso - kana iwe wakanyora kuti iwe wakashanda pabasa rako rekupedzisira kubva 2013 - 2017, ita shuwa kuti izvi ndizvo zvauri kutaura. Ukangotsauka pane chimwe chinhu chawakanyora / chakambotaurwa, iwe unopa mubvunzi mukana wekukupokana.
Saka, ikozvino zvatamhanya nenzira idzi dziri nyore dzekutaura nezvako, pane chinhu chimwe chete chasara kuita - kudzidzira!
Iwe unogona kuverenga nezvazvo zvakanyanya sezvingaite sevanhu, asi matanho acho haasi kuzoita zvine musoro kunze kwekunge watanga kuzviisa mukufamba.
Kutaura nezvako kunogona kunzwa kuchityisa pakutanga, kunyangwe iwe uchizviziva uri nani kupfuura chero ani zvake. Kunyanya paunoratidzwa mhando idzi dzekudyidzana, nekukurumidza iwe unowana nzira inokushandira iwe kuitira kuti unzwe kugadzikana zvechokwadi uye chivimbo.
logan paul kuchikoro chesekondari
murume wangu anonditsamwira nguva dzese
snoop dogg uye sasha mabhanga
kunzwa sekunge hauna shamwari
zvekuita kana iwe usingazive zvekuita muhupenyu
kuzviparadzanisa nemurume akaroora